Dabcan duunyo iyo dugaag isbaddal horumarineed laga sugi mahayo ee dad iyo shaqsiyaad ayaa laga sugaa is baddal. Sidaa darteed ciwaanka qormadu wuxuu ku fadhiyaa qof kaliya ma keeno mana yeesho saamayn wax badasho laakiin qoraal hal qof uu qoray waa keeni karaa.
Qiimaha qalinka waxaa noogu filan inuu yahay shaygi ugu horreeyay ee Eebe uumay. Sida ku cad axaadiis badan Eebbe ayaa abuuray Qalinka ka dibna ku yiri qor. Qalinki ayaa yiri maxaan qoraa? Eebbe ayaa ku yiri waxa imaan doono ilaa qiyaamaha qor. Eebbe mar waa kan ku dhaartay Qalinka iyo wuxuu sadareeyay (Nuun, 1). Mar wuxuu aadanaha ugu manno sheegtay inuu baray qalinka (Calaq 4).
Dhammaan shaqsiyaadka dunida kusoo kordhiyay isbaddal waaro waxay ka tageen kutub. Tusaale waxa noogu filan anbiyada Eebbe nabad galyo korkooda ha ahaatee.
Qoraalku wuxuu toosiyaa bulsho huroddo oo habsan ah. Hal qiso aan isku tusaalayno. Lu Xun (Luu Shun) wuxuu ahaa aqoonyahan shiinays ah oo noolaa 1881-1936. Wuxuu ka dhashay reer danyar ah oo shaqaale dowladeed ah. Aabbihi xanuun ayaa ku dhacay Lu oo wiil yar ah. Wixii ciddu xoolo lahayd daawaynta odaga ayay ku baxday waxaana kordhay saboolnimadi reerka.
Lu Xun oo arkay dhibka dawo iyo daryeel la’aan, ee ay keentay dhaqaatiir la’aantu, ee haysto aabbihii wuxuu go’aan ku gaaray inuu marto caafimaad si uu u badbaadiyo bukaannada aabbihii oo kale ah. Wuxuu waxbarsho caafimaad oo dibadda ah ka helay Jabbaan. Markuu meel dhexe marinayo waxbarshadi ayaa waxaa usoo baxay in xirfadda caafimaad ee uu baranayo aysan waxbo ka baddali karin laandheeraha Shiine ee ka habsaamay horumarka dunida.
Wuxuu yiri aqoon walba oo ay leedahay, ummad hurudo ah waxay addoon u ahaan mid soo jeeddo marka dadkaygu waxay rabaan in hurdada laga kiciyo. Sidaas ayuu ooga tagay waxbarashadi caafimaadka una qaatay qalin. Wuxuu u jeestay qoridda sheekooyin gaagaaban oo mala-awaal ah kuwaas oo uu sawirro kala duwan kaga bixin jiray nolosha Shiinaha iyo hurdada ay ku jiraan.
Waxaan hubaa in akhristayaasha qormadaan ay markiiba kusoo dhacayso sheeko faneedyo meelaha lagu qoray maxay soo kordhin, una arkayaan go’aanki Lu Xun mid lunsanaa. Laakiin Xaqiiqdi Lu Xun wuxuu ka mid noqday dadki ugu saamaynta badnaa guud ahaan dalka Shiinaha ee abid soo maray. Dood la’aanna wuxuu ku jiraa tobanki qof ee ugu saamaynta badnaa isbaddalladi ku yimid horumarka Shiinaha qarnigi labaatanaad. Aabbihi Shiinaha casriga ah Mao Zendong wuxuu ku tilmaamay Lu Xun wali loo soo diray Shiine.
Waxaa ka dhicin Lu Xun, Mahatiir Mohamed oo ah raysulwaraasha Malayshiya hadda talada hayo muddo dheerna xilkaas hayn jiray. Dadka Malaysiyaanka ah waa dad qabow dabeecad ahaanna aan jecalayn siyaasadda. Taasi waxay ku keentay inay u nuglaadaan guumaysiga oo dhaxalsiiyay inay dalkooda ku noqdaan masaakiin ay majaraha dhaqaale u hayaan tiro yar oo soo galooti ah xataa xornimadi ka dib.
Mahatiir oo arkayay dadkiisa sida ay u hurdaan ayaa billaabay qoraallo kusoo baxo joornaalada waddanka ugu caansan isagoo isticmaali jiray magac aan kiisa ahayn si uu uga fogaado dhib. Ugu danbayn wuxuu qoray buuggiisa caanka noqday ee Malay Dilemma. Qormooyinki Mahatiir waxay qayb weyn ka noqdeen baraaruggi Malaysiyaanka taasoo horseedday inay dalkooda dib u hantaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba, maantana noqdaan waddamada ugu hormarsan dunida Islaamka.
Sidoo kale, qoraalku wuxuu keenaa isbadal siyaasadeed wuxuuna saamayn ku yeeshaa hab fakerka siyaasiyiinta iyo kuwa is baddal doonka ah. Tusaale, Karl Max iyo Friedrich Engels waxay 1848-di daabaceen buug konton bog kaliya ah oo ay u baxsheen manafestada hantiwadaagga (communist manifesto). Risalaadaas yar waxay gaartay dunida dacalladeeda waxayna kicisay kacaanno gilgilay dunida boqortooyooyin xoog badnaana dhulka dhigay.
Qoraalku ma uusan suuragalin in farriintu gaarto meel fog oo kaliya ee wuxuu sidoo kale abuuray saamayn xoog badan oo duufsatay fakerka shucuub aan aqoon qorayaasha iyo meel ay ku nool yihiin toona. Erayga qoran ayaa ka xoog badan midka afka laga yiri.
Qoraalku wuxuu usoo jeediyaa dareenka siyaasiyiinta xagga dadka dan yarta ah wuxuuna horseedaa faragalin keento isbaddal horumarineed. Jakob Riis wuxuu ahaa nin asal ahaan Danmaak kasoo jeedo oo noolaa intii u dhaxaysay 1849-1914-ki. Wuxuu isagoo dhalin yar u haajiray Maraykanka. Waqtiga uu Jakob tagay Maraykanka waxay ku beegnayd markii ree Yurub u naq raaceen qaaradda dadki lahaa la gumaaday ee Emeerika.
Waxaa imaanayay dad raxan raxan u socdo oo aan cidna ka horrayn. Arrintaan waxay abuurtay dad badan oo ku nool nolol hoose iyo darbi jiif badan. Meelaha sida ba’an loogu baahnaa waxaa ka mid ahayd New York oo dhinac ka ahayd qashin-qub ay ku noolyihiin masaakiinta dhinaca kale muraayad ay ku noolyihiin maal-qabennada.
Jakob oo noqday qoraa iyo wadaad masiixi ah wuxuu u dul qaadan waayay sida magaaladiisu u kala qaybsan tahay. Wuxuu go’aansaday inuu u istaago wax ka baddalida nolosha dadka saboolka ah ee ku noolaa New York. Waxaa usoo baxday sida ugu fudud ee dadkaan wax loogu qaban karo inay tahay in indhaha siyaasiyiinta iyo kuwa maal-qabeenka loo soo jeediyo dadkaan.
Habka ugu sahlan ee taasi lagu suura galin karo ayaa ula muuqatay inay tahay inuu sameeyo qoraallo joogto ah oo ka warramo xaaladda dhabta ah ee dadkaas ku noolyihiin. Ugu danbayn 1989ki ayuu qoray buuggiisa la magac baxay How the other half lives (sida dhinaca kale u noolyahay).
Buugaan oo ka koobnaa sawirro uu ka qaaday xaafadaha masaakiinta iyo farriimo kala duwan ayaa soo jiitay indhaha shacabki Maraykanka ugu danbayna wuxuu horseeday inay dowladdu faragaliso xaafadahaas. Saamaynti buuggu waxay keentay in xeerar dhowr ah oo isxigxigay kuna saabsan guryaynta iyo caawinta saboolka la meel mariyo. Xeerarkaas waxaa lagu dabaqay dalka oo dhan taasoo natiijada buugga ka dhigayso mid wada gaartay dalka oo dhan.
Dhabta ayaa ah in qoraalku yahay muraayad uu qoruhu hordhigo bulshada si ay u arkaan foolxumada ay ku nool yihiin, caddaalad darrada ka jirto deegaannadooda, waxa ay qabaan dariskooda iyo sida ay uga dib dhaceen dunida kale. Qaraha wuxuu qoraaalka bulshada ku tusaa, awooddooda ka qarsoon, wuxuu baraarujiyaa cuqaashiisa jiifto, wuxuuna dhiirri galiyaa kuwa niyad jabay. Qoraalku waa muraayad loo baahan yahay in maalin walba la isku eego.
Sidaa awgeed, dadkeennu wuxuu u baahan yahay qorayaal dhinac walba wax ka qoro. Waxaan u baahannahay kuwo noo qoro sheekooyin ay caruurtu iyo dhalintu noo akhristaan kuna ogaadaan xaaladda dalkoodu marayo. Waxaan u baahannahay kuwo noo qoro buug ay akhristaan madaxada dalka iyo kuwa joogo maqaamyada sare si ay u ogaadaan xaaladda dadka iyaga aan ahayn.
Waxaan u baahannay kuwo noo qoro buug ay akhristaan aqoonyahanka si ay u arkaan hurdada ay ku jiraan iyo sida ay u gabeen howshoodi. Waxaan u baahannay kuwo noo qoro buug ay akhristaan kuwo u baahan maddadaalo kaliya si ay ugu madadaashaan wax ku saabsan dalkooda iyo dadkooda inti ay akhrin lahaayeen mid ku qusaysa dadyow kale.
Inta aaminsan in Soomaalidu dhago waxmaqlo iyo qalbi wax fahmo midna aysan lahayn oo qoraal iyo farriin kale toona aysan anfacayn, waxaan leeyahay Lu Xun iyo kuwa kale ee aan kor ku sheegay waxay aaminsanaayeen in dadkoodu dhintay oo dhaga belay haddana ma aysan joojin qoraalki ee rajo unbay qabeen waana guulaysteen ugu danbayn.
Lu Xu ayaa yiri dadkaygu waxay la mid yihiin dad dhex hurdo guri shub ah oo albaabbadu u xiran yihiin dushana dab ooga shidan yahay oo hal qof kaliya bannaanka ka joogo oo ku qaylinayo ka baxa guriga waa uu gubanayaaye. Maadaama ay hurdaan warkama hayaan dabka ku shidan oo mar dhow gubi doono iyaga iyo guriga oo dhan, mana maqlahayaan qaylada qofka dibadda joogo. Waxaa lagu yiri tusaalahaan iyo wacyi galintaadu iskuma toosna, waayo dad xaaladdaas ku jiro maxay u taraysaa qaylo bannaanka lala taagan yahay. Wuxuu ku jawaabay, waxaa laga yaabaa inuu qof ama labo ay ku toosaan qaylada oo ay inta kale kiciyaan dhammaanna sidaas ku badbaadaan.